18 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် » 18 ပတ်သားကလေး
ယခုအချိန်တွင် သင့်ကလေးသည် သူမ၏ လက်များခြေများကို အသုံးပြု၍ မိနစ်အနည်းငယ် ကစားလာသည်။ အပြုအမူတစ်ခုကို တစ်စုံတစ်ရာကို သေချာသည်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်ရန်နှစ်သက်တတ်သည်။ ပြီးလျှင် ရလဒ်ပြောင်းလဲစေရန်နောက်တစ်မျိုးကို ထပ်လုပ်လိမ့်မည်။ ကလေးသည် နိုးနေသည့် အချိန်များတွင် သူ့အိပ်ရာထဲတွင် သူ့ဘာသာ ပျော်ရွှင်နေသော်လည်း သူ့ကို မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေရန် လိုအပ်နေသေးသည်ဖြစ်၍ သင့်ကလေးငယ် ဘာလုပ်နေသည်ကို တိတ်ဆိတ်စွာစောင့်ကြည့်နေပါ။
၁၈ ပတ်တွင် သင်၏ ကလေးသည်-
• သူ၏ခေါင်းကို ထောင်မတ်နေရန် ထိန်းထားနိုင်သည်။
• မှောက်နေစဉ် လက်ကိုထောက်၍ ကိုယ်ကို မတင်နိုင်သည်။
• အရုပ်များကို ကိုင်ထားနိုင်သည်။
• လက်နှင့်ခြေထောက်ကို တစ်ချိန်ထဲတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
• အခန်းထဲတွင် လွတ်လပ်စွာဆော့ကစားနိုင်သည်။
• ပစ္စည်းအသေးများကို အာရုံထားသည့်အတွက် ပါးစပ်ထဲကောက်မထည့်မိစေရန် ထိုအရာများကို သူ့အနားတွင် မထားပါနှင့်။
• အပြုအမူတစ်ခုကို ရလဒ်ကို မြင်ရသည်အထိ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပြီး အပြောင်းအလဲကို မြင်ရစေရန် နောက်တစ်ခုကို ပြောင်းလုပ်တတ်သည်။
• ပစ္စည်းတွေကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
• စိတ်လှုပ်ရှားမှု ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
သင့်ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် သင့်ကလေးနှင့် အတူကစားပေးနိုင်သည်။ သင့်ကလေး၏ အာရုံကို တက်ကြွစေရန် ကစားနည်းများစွာရှိသည်။ သင့်ကလေးသည် အရာအားလုံးကို တောက်လျှောက်သင်ယူနေသည်။ သင့်ကလေးငယ်ကို အရောင်မတူ၊ပုံစံမတူသော အရာဝတ္ထုများကို ဆုပ်ကိုင်ခိုင်းပါ။ ကလေး၏ အမြင်နှင့်အထိအတွေ့ အာရုံကောင်းလာစေသည်။ ကလေးများအားလုံးကြိုက်နှစ်သက်သောကစားနည်းမှာ တူတူရေ၀ါး ဖြစ်သည်။
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သူနာပြုမှ သင့်ကလေး၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
• သင့်ကလေး၏ အရင်က ကျန်းမာရေးပြသနာများ အပါအ၀င် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
• ကလေး၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် ဆရာဝန်မှ ကလေး၏ ခေါင်းကို ထိန်းထားနိုင်စွမ်း၊လက်များကို အသုံးပြုခြင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်မှုများကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် သင်ပြောပြသည့်အကြောင်းအရာများပေါ်အခြေခံ၍ ကလေးကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
ကလေးအသက် ၁၈ ပတ်တွင် ကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်၇န်အတွက် အောက်ပါတို့သည် သင်သိထားသင့်သော အကြောင်းအရာအချို့ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော မျက်စိနာခြင်းဖြစ်တတ်သည်။ မျက်လုံးအဖြူသားကို ဖုံးအုပ်ထားသော အမြှေးပါးနှင့် အတွင်းဘက်မျက်ခွံတွင် ယားယံနာကျင်ပြီး မျက်လုံးကို နီရဲ၊ ရောင်ရမ်းစေခြင်း၊ မျက်လုံးတွင် အဖြူဖတ်များဖြစ်ခြင်း၊အ၀ါရောင်၊ အစိမ်းရောင်အနှစ်များ မျက်ဝတ်ကဲ့သို့ထွက်ခြင်း နှင့် မျက်လုံးခြောက်ခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။ သင့်ကလေးငယ်သည် မနက်ဘက်တွင် မျက်လုံးဖွင့်မရသည်မျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဖက်သို့မဟုတ် မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးတွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်ထံသို့ပြသ၍ ကုသမှုခံယူပါ။
ထိုရောဂါသည် ကူးစက်တတ်သောရောဂါဖြစ်၍ သင့်ကလေးထံမှ ရောဂါမကူးခံရရန် သတိပြုနေပါ။ ကလေးကို မျက်လုံးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးလျှင် လက်ကို မကြာခဏဆေးကြောပါ။ ကလေးကို အိမ်ထဲတွင်သာထားပြီး၊ အိပ်ရာ၊ အ၀တ်အစားနှင့် မျက်နှာသုတ်ပ၀ါများကိုလည်း သန့်ရှင်းစွာထားပါ။
သင့်ကလေး၏ မျက်စိနာရောဂါသည် ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်လျှင် သင့်ဆရာဝန်မှ ပိုးသတ်ဆေးပေးပါလိမ့်မည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်လျှင် သင့်ကလေးတွင် အအေးမိသောလက္ခဏာများရှိတတ်ပြီး သင့်ဆရာဝန်မှ ကလေးမျက်လုံးကို မျက်နှာသုတ်ပ၀ါနွေးနွေးဖြင့် သုတ်ပေးပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့ပြောပါလိမ့်မည်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လျှင် သင့်ဆရာဝန်မှ အကြောင်းရင်းကို သိနိုင်ရန်မေးမြန်းပြီး သင့်ကလေးကို ပတ်ဝန်ကျင်မှ ဖြစ်စေသောအကြောင်းရင်းများနှင့် ဝေးဝေးထားရန်ပြောပါလိမ့်မည်။ မျက်စဉ်းခတ်ရန်လည်း ပေးပါလိမ့်မည်။ ကလေး၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မျက်ရည်အိတ်နေရာ ကို သွေးစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန်နှိပ်နယ်ပေးခြင်း၊ ဖြည်းဖြည်းဖိပေးခြင်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ တချို့ကလေးများတွင် ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေးသည် အလွန်လှုပ်ရှားတက်ကြွပြီး ငြိမ်ငြိမ်မနေလျှင် ကိုယ်အလေးချိန်သည် ဖြည်းဖြည်းချင်းပင်တိုးလာပါလိမ့်မည်။ သင့်ကလေး၏ ကိုယ်အလေးချိန်သည် ပုံမှန်အောက်ရောက်နေလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးရန်အရပ်ကို တိုင်းတာပါ။ ကလေး၏ အရပ်နှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို သက်ရောက်စေသော မျိုးရိုးဗီဇအပါအ၀င် အချက်များစွာရှိသည်။ သင်နှင့် သင့်အမျိုးသားသည် ပိန်ပိန်ပါးပါးဆိုလျှင် ကလေးသည်လည်း ထိုသို့ဖြစ်လာနိုင်ချေများသည်။ ကလေးက လှုပ်ရှားမှုများပြီး အငြိမ်မနေသည့်အတွက်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကျွေးသည့်အထဲတွင် လုံလောက်သည့် အာဟာရမရရှိသည်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင့်ကလေးကို ကျွေးသည့်အာဟာရကို ကန့်သတ်မှုမလုပ်မိရန် အရေးကြီးပါသည်။ အချို့မိဘများသည် သူတို့၏ကလေး ကျန်းမာစွာကြီးပြင်းလာနိုင်ရန် ငယ်စဉ်ကပင် အစားအသောက်၏ ကယ်လိုရီကို ကန့်သတ်ပေးတတ်ကြသည်။ ထိုအရာသည် ယခုအရွယ်တွင် အလွန်အန္တရာယ်များပါသည်။ ကလေးများသည် ပုံမှန်ကြီးထွားပြီး ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ရန် လုံလောက်သော အာဟာရများရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်ကလေးသည် ပုံမှန်ထက် ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနေသည်ဟု ထင်ပါက သင့်ကလေး၏ အစာစုပ်ယူမှုမကောင်းသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်မှုပုံမှန်မဟုတ်လည်းဖြစ်နိုင်သလို ရောဂါများရှိနေသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် ပြသဆွေးနွေးပါ။
ယခုအချိန်တွင် ကလေးတွင် အောက်ပါ အမူအကျင့်များ၊အပြုအမူများရှိနေနို်င်သည်။
ကလေးတိုင်းလိုလိုပင် အသက်ငယ်ချိန်တွင် လက်မစုပ်တတ်ကြသည်။ ပထမတွင် သူ၏လက်ကို သူ့ပါးစပ်ထဲသို့ အမှတ်မထင်ထည့်တတ်သည်။ သို့သော် ကြာလာသောအခါ ထိုသို့ပြုလုပ်ရသည်ကို နှစ်သက်သွားပြီး အလေ့အထလိုဖြစ်သွားတတ်သည်။
ကလေးသည် လက်စုပ်နေလျှင် သင့်အကူအညီမလိုပဲ သူ့ဘာသာနေတတ်၍ အဆင်ပြေနေသလို သင်ထင်မိတတ်သည်။ သို့သော် လက်ကို ဆက်တိုက်စုပ်နေတတ်သောအခါ သင့်ကလေးကျောင်းသွားသည့်အချိန်အဆင်မပြေမည်ကို သင်စိတ်ပူလာလိမ့်မည်။ သို့သော် စိတ်မပူပါနှင့်။ လက်စုပ်ခြင်းသည် ကလေး၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်း၍ဖြစ်ခြင်း၊ ကလေး၏ သွားပေါက်ခြင်းနှင့် ပါးစပ်ပုံပျက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည် ဆိုသည့် အထောက်အထားမရှိပါ။ အသက် ၄နှစ်-၆နှစ်လောက်ရောက်သည့်အခါ ကလေးအများစုတွင် ထိုအကျင့်ပျောက်သွားတတ်သည့်အတွက် ထိုအချိန်မတိုင်ခင် ကလေးကိုထိုအကျင့်ပျောက်စေရန် လုပ်ပေးဖို့ မလိုအပ်ပါဟု ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ကြသည်။ လက်စုပ်ခြင်းသည် ကလေးအသက် ၁၈လမှ ၂၀ လအတွင်းတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၈၀ ရာခို်င်နှုန်းခန့်သည် အသက် ၅နှစ်မတိုင်ခင် ပျောက်သွားပြီး ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၆နှစ် အထိရှိတတ်သည်။ တစ်နေကုန် လက်စုပ်နေခြင်းကို ပျောက်စေရန် အရုပ်များ၊ ကစားနည်းများနှင့် သူ့ကို အာရုံလွှဲနိုင်သည်။
ထို့နောက် ၁၉ ပတ်တွင် ကလေး မည်သို့ ဆက်လက်ကြီးထွားလာမည်နည်း။
Print. Page 289-309.
ညှို့အားပြင်းတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲ
လေဆာဖြင့်မျက်စိပါဝါဖျောက်ခြင်း (Lasik Surgery)